हेलिकप्टर चढेर जेलबाट नै कुख्यात गुन्डा नाइके फरार, खोजीका लागि तीन हजार प्रहरी परिचालित
Thursday October 28, 2021 | |
कुख्यात फ्रान्सेली गुन्डा नाइके रिदुअन फइद, जो फ्रान्सको पेरिस स्थित जेलबाट नै हेलिकप्टर चढेर फरार भएका छन् । चौतर्फी सुरक्षा घेराका बाबजुत पनि उनि जेलमानै हेलिकप्ट मगाएर सुरक्षा घेरा तोड्दै भागेका हुन् ।
कसरि भागे त कुख्यात गुन्डा नाइके रिदुअन ?
रिदुअन, जेलको आगन्तुक कक्षमा आफ्ना भाई सँग कुराकानी गरेर बसिरहेका थिए । त्यही समयमा उनलाई जेलबाट भगाउन अत्याधुनिक राइफलसहित तीन जना हेलिकप्टर लिएर आए र जेल परिसरमै रोकिए । तीन जना मध्य १ जना बन्दुकधारी हेलिकप्टरको सुरक्षा गर्दै त्यहीं बसे । दुईजना बन्दुकधारी ओर्लिए र धूँवा फाल्ने बम र फलाम काट्ने हतियारको प्रयोग गरी रिदुअनलाई जेलबाट निकाले र सबैजना हेलिकप्टर चढेर फरार भए । उनिहरुले त्यहाँबाट हेलिकप्टर नजिकैको गोनिसी क्षेत्रमा पुर्‍याए र आफूहरु ओर्लिर भागे । घटनाको केही बेरमा प्रहरीले हेलिकप्टर भने फेला पारेको थियो ।
हेलिकप्टरका लिएर आएका पाइलट व्यावसायिक उडान तालिम दिने व्यक्ति हुन् र उनलाई ती बन्दुकधारीहरूले बन्धक बनाएर ल्याएका थिए । बन्धक बनाइएका पाइलटलाई पछि रिहा गरिएको थियो र आघातबाट पीडित पाइएकाले अस्पताल लगिएको थियो । हेलिकप्टरबाट ओर्लिएपछि रिदुअन एउटा कारमा चढेर ए वान मोटरवेतर्फ अघि बढेको थियो । अहिले उनको खोजीका लागि तीन हजार फ्रान्सेली प्रहरी परिचालित गरिएको प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै एफएफपी समाचार संस्थाले जनाएको छ । ती भगौडा बन्दीलाई पक्रन हरसम्भव उपाय भइरहेको फ्रान्सको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । हेलिकप्टर अवतरण गराइएको जेलभित्रको परिसर हेलिकप्टरलाई पासो थाप्न नसकिने उक्त जेलको एकमात्रै परिसर रहेको थियो । आइतवार अपरान्ह भएको उक्त घटनामा कोही पनि घाइते नभएको बताइएको छ । ४६ वर्षीय रिदुअन फइदलाई डकैती मुद्दामा २५ वर्ष जेल सजाय तोकिएको थियो ।
को हुन् कुख्यात गुन्डा नाइके रिदुअन फइद ?
सन् १९७२ मा जन्मिएका रिदुअन पेरिस क्षेत्रमै हुर्किएका थिए । सन् १९९० को दशकमा फ्रान्सको राजधानीमा रिदुअनले सशस्त्र डकैती र फिरौती असुल गर्ने एउटा समूह सञ्चालन गरेका थिए । रिदुअनले आफ्नो जीवनशैली गुण्डा नाइके पात्र भएका हलिवूड सिनेमाबाट प्रेरित भएको बताउने गर्थे । अमेरिकी निर्माता माइकल म्यानका अपराध सम्बन्धी सनसनीपूर्ण चलचित्रबाट आफू प्रेरित भएको रिदअनले बताउँथे । बैंक डकैतीको सीप सिक्न दर्जनौं पटक चलचित्रहरू हेरेको उनले दाबी गरेका थिए ।
सन् १९९८ मा बैंक डकैती र चोरीका एउटा भन्दा बढी अभियोगमा पक्राउ परेपछि फइद थुनामा पर्ने र जेलबाट भाग्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । जेल तोडेर उनी भागेको यो दोस्रो घटना हो । सन् २०१३ मा उनले चारजना गार्डलाई कब्जामा लिएर कैयौं ढोकाहरू डाइनामाइट विस्फोट गराउँदै भागेका थिए । त्यसबेला उत्तरी फ्रान्सको जेलमा पुर्‍याइएको आधा घण्टामै उनी भाग्न सफल गएका थिए र ६ हप्तासम्म फरार रहेका थिए । त्यसो त फ्रान्सको जेलबाट हेलिकप्टरमा भाग्ने उनी पहिलो बन्दी होइनन् । सन् २००१ मा तीनजना सशस्त्र डाँकाहरू दक्षिणी फ्रान्सको एउटा जेलबाट भागेका थिए । यस्तै प्रवृत्तिबाट अन्तर्राष्ट्रिय लागू औषध तस्करीको सञ्जाल चलाउने आरोप खेपिरहेका बन्दीहरू पनि त्यसको दुई वर्षपछि भागेका थिए । एजेन्सी
शुरू भयो रेडियो क्यान्डिडको नियमित प्रसारण
काठमाडौँ । रेडियो क्यान्डिड ९२.७ मेगाहर्जको नियमित प्रशारण आज, भदौ…
बङ्लादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियालाई पाँच बर्षको जेल सजाय
एजेन्सी । बङ्लादेशकी पुर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियालाई पाँच बर्षको जेल सजाय फैसला भएको छ । भ्रष्टाचार अरोपमाथि अन्तिम सुनुवाई गर्दै…
यस्तो छ सिरियाका भाइरल भिडियोको वास्तविकता
हिमाल कोइराला ।सिरियामा भइरहेको युद्ध र त्यसले बालबालिकालाई परेको प्रभाव देखाउँदै फेसबुक, ट्विटर र अरु सामाजिक सञ्जालमा अन्त्यन्तै कारुणिक एवं…
जन्मने वित्तिकै साटिएका बच्चाहरु– जो जन्मघर फर्कन मान्दैनन्
विविसी, भारत । कुरा कुनै बलिउड फिल्मको पटकथा जस्तो छ । पहिलो, दुई बच्चाहरु जन्मिनेबित्तिकै अस्पतालमै साटिएका थिए । दोश्रो,…
रुसको राष्ट्रपतिमा पुन: पुटिन
एजेन्सी, ५ चैत । रुसको राष्ट्रपति निर्वाचनमा भ्लादिमिर पुटिन भारी मतअन्तरले विजयी भएका छन् । अब उनी आउँदो ६ वर्षसम्म…
अश्लिल फिल्म हेर्दा उत्तेजना बढेपछि यि युवकले काटे आफ्नै लिङ्ग
एजेन्सी । पोर्न फिल्म हेर्दा हेर्दै उत्तेजित भएर पागलपनको स्थितिमा कोही पुगेको कहिल्यै देख्नुभएको छ । अन्तराष्ट्रिय मिडियाका अनुसारा थाइल्याण्डको…
ट्रम्प-किम भेट्दै : सुरक्षा गोर्खा प्रहरीले दिने
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच अर्को साता हुने शिखर वार्तास्थलको सुरक्षामा सिंगापुर प्रहरीका गोर्खा…
अफगानिस्तानका सुरक्षाकर्मी र तालिवानका लडाकुले सँगै मनाए ईद, राष्ट्रसंघद्वारा स्वागत
अफगानिस्तानका सुरक्षाकर्मी र आतंकबादी संगठन तालिवानका लडाकुले सँगै ईद मनाएको कुरा बाहिरिएपछि राष्ट्रसंघले स्वागत गरेको छ । अफगानिस्तानको सबैभन्दा ठूलो…
थाइल्याण्डमा गुफामा फसेका बालक भेटिए
थाइल्याण्ड । थाइल्याण्डमा बाढीका कारण एउटा गुफाभित्र फसेर हराइरहेका १२ जना किशोर र उनीहरूका फुटबल प्रशिक्षक नौ दिनपछि सोमबार फेला…
थाइल्याण्डको गुफामा फसे १३ किशोर, १० दिन सम्म भोकै गुफाको बास, उद्धारमा समस्या
सुन्दै पनि कहाली लाग्छ – हिलो र पानीले भरिएको अनकंन्टार गुफामा १० दिन देखि १२ जना किशोर र एकजना युवक…